février 2017 - Page 2 sur 51 -
Nitombo indray ny famokarana herinaratry ny Jirama. Mamokatra herinaratra hatramin’ny 10 Mégawatt ny fampiasana milina iray fanindroany, izay nihodina nanomboka omaly. Efa tamin’ny volana Aogositra 2016 kosa no nampiasa milina mandeha amin’ny menaka mavesatra ny …Tohiny
Marc Ravalomanana : Ho diso fanantenana tanteraka
Efa tsy hita intsony izay iainana ka lasa miteniteny foana. Nefa azo heverina ihany koa fa efa izay no masaka ao an-dohan’ny filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, na misy ambadika. Tsiahivina mantsy ny fehezanteny tokana …Tohiny
“Misaora an’i Jehovah !”
Milaza ny hidina an-dalambe hono ny rezervista raha tsy voaloa ao anatin’ny iray volana ny volan’izy ireo araka ny fanapahan-kevitry ny Filan-kevi-panjakana laharana 180 ny faha-20 Oktobra 2010 ary ny fanapahan-kevitry ny kabinetran’ny praiminisitra laharana …Tohiny
Fanatsarana ny fambolena : Averina ny voly rakotra
Tato anatin’ny taona vitsivitsy izay dia lasa mikorontana ny tetiandron’ny famokarana eto amintsika. Mihalany tsiro ny tany vokatry ny fanimbana ny tontolo iainana. Fomba azo ampiharina amin’ny fambolena manoloana ny fiovaovan’ny toetrandro sy ny fahasimban’ny …Tohiny
Nivoatra ny toe-draharaha. Mila ny marina momba an’iny raharaha Befandriana Avaratra iny koa ny filoham-pirenena, fa tsy ny mpiaro ny zon’olombelona ihany akory. Niditra an-tsehatra ankehitriny ny “komity mpanadihady” hanao ny fanadihadiana momba io raharaha ...Tohiny